Fivarotana onja - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax dia mampiasa milina Weld Soldering hametahana ireo singa misy lavaka. Izy io dia manana kalitao tsara kokoa noho ny soldering tanana. Haingam-pandeha koa izy io.
Ny fantsom-pandrefesana dia mamorona onja solder amin'ny endrika manokana miaraka amina solder fluid ao anaty rano misy fandroana solder amin'ny alàlan'ny mercury. Avy eo apetraho PCB miaraka amina singa tafiditra ao amin'ny seza conveyor, ary mandalo ny onja solder amin'ny zoro sy ny halaliny manokana mba hahatsapana ireo tonon-taolana.
1. Fa maninona no misafidy soldering onja?
Rehefa lasa kely kokoa ireo singa ary mihalehibe kokoa ny PCB, dia nitombo ny fahafahan'ny tetezana sy ny boriborintany fohy eo anelanelan'ny tadin'ny solder. Ny famonoana onja dia mamaha io olana io amin'ny ankapobeny. Ankoatr'izay dia misy tombony hafa ihany koa:
(1) Solder amin'ny fanjakana mikoriana manampy PCB ambonin'ny soldered amin'ny solder bebe kokoa ary mitondra asa tsara kokoa ny conductivity mafana.
(2) mampihena ny fotoana ifandraisan'ny solder sy PCB.
(3) Ny rafi-pandefasana amin'ny fitaterana PCB dia tsotra atao amin'ny hetsika mihetsika fotsiny.
(4) Ny tabilao dia mifandray amin'ny solder amin'ny mari-pana avo lenta vetivety, izay mety hampihena ny fihenan'ny tabilao.
(5) Ny ambonin'ny solder vy dia manana anti-oxidant hanokana ny rivotra. Raha mbola mipoitra amin'ny rivotra ny onjan-tsolika dia mihena ny fotoana oksiasiôna ary mihena ny fako solder nateraky ny sisan'ny oksida.
(6) Ny kalitaon'ny solder sy ny solder amin'ny ankapobeny.
Mampiasa soldering onja rehefa ilaina ny plug-ins ao amin'ny tabilao mihodina
3. Fanomanana ny famokarana
Mampihetsi-po ny Mametaka Paste
4. Ny fahafahantsika: Sets 3
Marika ： SUNEAST
5. Mifanohitra amin'ny soldering onja sy ny soldering reflow:
(1) Ny soldering Reflow dia ampiasaina amin'ny singa chip; Ny famolahana onja dia natao indrindra ho an'ny plug-in solder.
(2) Ny soldering reflow dia efa misy solder eo alohan'ilay lafaoro, ary ny pacte solder ihany no atsonika ao anaty lafaoro mba hamoronana mpiray solder; Ny fametahana ny onja dia atao tsy misy solder eo alohan'ny lafaoro, ary apetaka ao anaty lafaoro.
(3) Solosaina miverina: ny endrika rivotra avo lenta dia maneho solder ho an'ny singa; Soldering Wave: Solder Molten dia mamolavola soldering onja amin'ny singa.